Abaartii Ugu Xumayd 60 Sano, oo ku Dhufatay Geeska Afrika – Rasaasa News
Jun 29, 2011 Abaartii Ugu Xumayd 60 Sano, oo ku Dhufatay Geeska Afrika
Abaartii ugu xumayd mudo 60 sano, ayaa ku dhufatay geeska Afrika, taas oo abuurtay dhibaato cunto yaraan iyo nafaqa xumo aad u saraysa, qaybo ka mid ah dalalka Kenya, Somalia iyo Ethiopia, oo ay hor u haysatay xaalad cunto yari ah, ayey sheegtay UN.
In ka badan 10 milyan oo ruux ayey hada samaysay waxyeelada abaartu dadyowgaas oo ku nool dalalka Jabuuti, Ethiopia, Kenya, Somaliya iyo Yugandha, U.N-tu waxay sheegtay in xaalada abaartu ay sii xumaanayso.
“Laba xili oo isku xiga ayuuna roob difiq ka dhihin degaanadaas, taas oo keentay in ay abaartu noqoto mid ka mid ah sanooyinkii ugu qalalaa tan iyo 1950/51, waxaa qalay meelo badan oo xoola daaqeen ah,” sidaas waxaa hadal kooban ku tidhi Elisabeth Byrs oo ah haweenay afhayeen u ah xafiiska la socodka arimaha bi,aadaminimada ee U.N.
“Ma jiraan waxayaabo suurto galin kar in ay isbadasho xaaladu tan iyo inta laga gaadhayo 2012” ayey tidhi haweenaydu.
Qiimaha cuntada lagama maarmaanka ah ayaa sare u sii kacaysa gabalka geeska Afrika, taas ka dhigaysa xaalada dadka ku jira nolosha hoosaysa ee caadiga ah mid liidata.
heerka Nafaqa xumada caruurta ee meelaha ay abaartu sida xun u saamaysay ayaa ka badan laban laab meesha ugu hoosaysa ee loo gurmado boqolkiiba 15%, waxaana la filayaa in ay kor aad uga sii kacdo.
Heerka dhimashada oo ay caruurtu ku jirto ayaa aad u saraysa sida la wariyey, laakiin haweenaydu ma ayna sheegin tiradu inta ay gaadhayso.
Abaarta iyo dagaalada ayaa abuuray abid tiradii ugu badnayd ee ka barakacda guryahooda dadka Somalida ah, kuwaas oo in ka badan 20,000 ay labadii todobaad ee tagay soo gaadhay dalka Kenya, sidaasna waxaa Jamcihii sheegtay hayada qaxootiga ee U.N UNHCR.
In ka badan kala badh caruurta Somalida ah ee imanaya xeryaha qaxootiga ee ku yaal Ethiopia ayey nafaqa xumo haysaa, laakin kuwa soo gaadha Kenya ayaa in yar ka roon, bay tidh Byrs.